Wasiirka ganacsiga XFS oo si weyn looga loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe – Radio Muqdisho
Wasiirka ganacsiga XFS oo si weyn looga loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya Eng. Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Wasiirka iyo wefdiga safarkiisa ku wehliya ayaa halkaasi u tagay sidii ay uga qayb geli lahayeen kulanka wada-tashiga hindise sharciyeedka shirkadaha, kaas oo lagu wado in uu ka furmo magaalada Garowe ee caasimada Puntland, waxaana lagu wadaa in maalinta berri ah uu furmo.
Kulankaan wada-tashiga ah ayaa waxa ka qeyb qaadanaya guddiga Aqalka Sare u qaabilsan maaliyadda, dhaqaalaha, ganacsiga iyo warshadaha, wasiirrada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, guddiyada ganacsiga iyo warshadaha ee golaha wakiilada dowlad goboleedyada.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo xariga ka jaray dhismaha waddada isku xirta isgoosyada Siinaay iyo Baar-Ayaan”Sawirro”
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo xariga ka jaray dhismaha waddada isku xirta isgoosyada Siinaay iyo Baar-Ayaan"Sawirro"